Niger oo ku dhawaaqday in dalka uu galayo 2 maalin oo baroor diiq ah | Dayniile.com
Home Warkii Niger oo ku dhawaaqday in dalka uu galayo 2 maalin oo baroor...
Niger oo ku dhawaaqday in dalka uu galayo 2 maalin oo baroor diiq ah
Dowladda Niger ayaa ku dhaawaqday in dalka uu galayo labo maalin oo baroor ah oo loo samaynayo 69 qof oo ay dileen kooxaha Al-qaacidda taageersan ee ka dagaalanta dalkaasi.
Weerarka lagu dilay 69-ka qof ayaa ka dhacay Koonfur Galbeed ee dalka Niger, gaar ahaan xadka dalkaasi uu la wadaago dalka Mali, waxaana kooxaha hubeysan ay weerar ku qaadeen kolonyo gaadiid oo siday qaar ka mid ah Madaxda dalka Niger.
Wasiirka Arrimaha gudaha ee dalka Niger ayaa sheegay in weerarka uu ahaa mid qorsheysan oo kooxaha hubeysan ay ku qaadeen wafdi kolonyo ah oo uu hogaaminayay duqa magaalada Banibangou, halkaasi oo qiyaastii 55 km u jirta Galbeedka Gobolka Tillaberi
Ma jirto cid sheegatay mas’uuliyadda weerarka lagu laayay dadka, balse Dowladda Niger ayaa falkaasi ku eedeysay inay ka dambeyeen kooxaha argagixisada ah.
Dowladda Niger ayaa wajaheysa weeraro gaadma ah oo kooxaha argagixisada ay ka fulinayaan xadka uu dalkaaasi la leeyahay dalalka Mali, Burkina Faso iyo Nigeria, halkaasi oo ay ku xoog badanyihiin kooxaha argagixisada dalkaasi ka dagaalanta, waxaana sanadkan oo kaliya ku nafweysay dad kor u dhaafaya 500.qof .
Bishii March ee sanadkan 137 qof ayaa lagu dilay saddex magaalo oo dhacda dhanka Koonfur Galbeed ee dalka Mali, kaasi oo ay ka dambeeyeen kooxaha argagixisada wadanka Niger ku dhuumaaleysaneysa.
Previous articleTartan isboorti oo lagu soo gabo gabeeyay GaalkacyoJimco
Dowladda Shiinaha oo deeq daawada COVID-19 ah ku wareejisay Dowladda Soomaaliya
Dowladda Soomaaliya ayaa Gelinkii dambe ee maanta Guddoontay Shixnad Daawada Talaalka Covid-19 oo ka timid Dowladda Shiinaha. Munaasabadda wareejinta daawad a talaalka oo ka kooban...
Guddiga gurmadka Koonfur Galbeed ee Gaaray Gaalkacyo oo sheegay in dadka...
Haweeney ku umushay suuliga diyaaradda ilmahana ku ridday baaldiga khashinka
DIGNIIN: Al-Shabaab oo qorsheenayaan Dhawaan Caasimadda ka Fuliyaan Qaraxyo...